सर्वहारा क्रान्ति गर्नै पर्छ – Dainik Lumbini
सर्वहारा क्रान्ति गर्नै पर्छ
नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिले सर्वहारा क्रान्ति÷अधिनायकत्व स्थापना गर्छ अर्थात नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेको सर्वहारा क्रान्ति कै कार्यक्रम हो । नेकपा (माओवादी) सञ्चालित सर्वहारा – किसान – निम्न पूँजीपति वर्गको संयुक्त संघर्ष – माओवादी जनयुद्धले नयाँँ जनवादी सर्वहारा क्रान्ति सम्पन्न गर्दछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिले पूँजीवाद – दलाल पूँजीवाद – सामन्तवाद अर्थात विस्तारवाद – सामन्तवाद वा घरेलु प्रतिक्रियावादको ध्वंश गर्दछ सर्वहारा अधिनायकत्व क्रान्तिले साम्राज्यवाद सामन्तवाद (संशोधनवाद – संसदवाद)को उन्मुलन गर्दछ भने सर्वहारा अधिनायकत्व अधिन क्रान्तिको निरन्तरताले साम्यवादतर्फ लैजान्छ ।
नेपालमा डा. ऋषि बराल, किरण र अर्जुन सिंह नेतृत्वले नयाँँ जनवादी क्रान्तिको निरन्तर प्रचार गर्दै आएका छन् । नेकपा (माओवादी) पुनर्गठनको प्रयत्न गर्दै छन् । यी नै प्रचार र प्रयत्नबाट माओवादी पार्टी गठनको प्रक्रिया बढ्दछ तब वर्ग संघर्ष सुरु हुन्छ । ग्रामीण वर्ग संघर्षमा पुग्दछ । छायामार युद्ध – जनयुद्धको उदय हुन्छ । आधार क्षेत्र – स्थानीय क्रान्तिकारी सत्ता जनसत्ता बन्दछ । कारबाही क्षेत्र, प्रचार क्षेत्र खडा गर्छन् । रणनीतिक रक्षा, सन्तुलन र आक्रमणका प्रक्रिया बढाइन्छ । तब केन्द्रीय जन विद्रोह विजय हुन्छ ।
माओवादी पार्टी – कार्यकर्ता – नेतृत्वले नयाँ जनवादी क्रान्ति – माओवादी जनयुद्ध सुरु – सञ्चालन गर्छ, आफ्नो माओवादी पार्टीमा सबै संशोधनवादी पराजीत गरेपछि क्रान्तिको सुरु हुन्छ । माओवादी ईन्टरनेशनल – नयाँजनवादी क्रान्ति – माओवादी जनयुद्धको ईन्टरनेशनल समावेश हुन्छ । माओवादी पार्टी – संगठन को २०१६ मई दिवस भेलाको निर्णय आत्मसात गर्छ ।
मालेमावाद – मओवादी जनयुद्धको लाईन – कार्यक्रम, नेपाली माओवादी जनयुद्ध – नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम जो नेकपा संस्थापक एवं पुष्पलाल, ००८ – २०१२ का किसान विद्रोह, झापाली नक्शाली विद्रोह, नेपाली माओवादी जनयुद्धका लाइन – कार्यक्रम – कार्यदिशा पकड्नु – आत्मासात गर्नु पर्छ ।
माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी जनयुद्ध – नयाँ जनवादी – सर्वहारा क्रान्ति (वैज्ञानिक समाजवाद) सञ्चालक अग्रदस्ता हो – सर्वहारा क्रान्तिको शक्ति हो । २०१२ मा मेड्रिड (स्पेन)मा मओवादी भेलले ‘माओवाद जिन्दावाद’ ‘संसारका मजदुर – उत्पीडित जनता एक हौं’ र ‘जनयुद्ध साम्यवादसम्म’ भन्ने तिन सिद्धान्त नारा दिएको छ ।
२०१६ मई दिवसमा एक घोषणा पत्र आएको छ माओवादी जनयुद्धको संसारले आत्मसात गरेको छ । यसविरुद्ध साम्राज्यवाद – वव अभाकीयन एवं नेकपा÷नेकपा र विप्लव – एमाले खडा छन् । संगै संसदीय दलहरू – हिन्दुराज संगै छन्, घरेलु प्रतिक्रियावाद सुदृढ बनाएका छन् ।
भूमण्डलीय साम्राज्यवादले उत्पीडित देश – जनता एवं आफ्नै देशका सर्वहारा समेतको ९५% जन – विश्वको शोषण गरेको छ । यिनले नयाँजनवादी क्रान्ति समपन्न गर्दछन् । नयाँ जनवादी – माओवादी जनयुद्ध यिनकै हो भूमण्डलीय साम्राज्यवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नयाँजनवादी क्रान्ति चल्दै आएको छ । साम्राज्यवाद ध्वंश गर्न नयाँजनवादी क्रान्ति समपन्न गर्न सर्वहारा क्रान्ति गर्नु पर्छ ।
भूमण्डलीय साम्राज्यवादविरुद्ध सर्वहारा वर्ग माओवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय नयाँजनवादी क्रान्ति सञ्चालन गर्छ । साम्राज्यवादी शासक वर्ग सत्ता ५% पूँजीपतिसंग रहेको छ । साम्राज्यवादी युद्ध निरन्तर चलि आएको छ । साम्राज्यवाद – नव उपनिवेशवाद – दलाल पूँजीवाद – दलाल पूँजीपति – सामन्ती वर्ग शासन – संशोधनवाद विरुद्ध माओवादी जनयुद्ध चलाइन्छ । वार्ता वैकल्पिक सरकार – शान्तिको भिख प्रति विद्रोहीलाई साम्राज्यवादले नै दिन्छ । ‘प्रति विद्रोही’ नेकपा विप्लव जस्ता–जस्तै हुन्छन् ।
माओवादी पार्टी – नेकपा (मओवादी) पून निर्माण गर्न निम्न संघटक सिद्धान्तहरू विश्वमा अवलम्बन गर्दै आएका छन् र नेपालमा पनि निम्न संघटक सिद्धान्तहरू आत्मसात गर्नुपर्छ –
१. साम्राज्यवादी – सामन्तवादी नेपाली घरेलु प्रतिक्रियावाद – दलाल – नोकरशाही पूंजीपति – सामन्त वर्ग सत्ता,
२. साम्राज्यवाद – साम्राज्यवादी युद्ध – संसदवाद – संशोधनवाद विषालु भ्रम,
३. एमसीसी करण–सिक्किमी करण अन्त्य गर्न,
४. मालेमावाद – माओवादी पार्टी
५. नयाँ जनवादी – माओवादी जनयुद्ध
६. वर्ग संघर्ष – ग्रामीण वर्ग संघर्ष, स्थानीय नयाँँ जनवादी सत्ता – सर्वहारा अधिनायकत्व
७. माओवादी इन्टरनेशनल खडा गर्ने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संस्थापक र पुष्पलाल, झापाली विद्रोह , मओवादी जनयुद्धको लाइन कार्यदिशा कार्यक्रम पुनः नविकरण गर्नुपर्छ तब मओवादी जनयुद्ध चलाउन सकिन्छ । यो कार्य सम्पन्न गर्न माओवादी बाटो वैज्ञानिक छ । अर्को सजिलो बाटो छैन । हो नेपालमा सडक, संसद, सरकार र वैकल्पिक सरकार नक्कली कम्युनिष्ट कै छ तर सिक्किमी करण र एमसीसी करण भएका छन्, हिन्दु राज पनि भन्छन् । हिन्दुराज भनेको नै सिक्किमी करण पनि हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी÷नेकपा (केपी ओली) माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड एवं नेत्र विक्रम चन्द सिक्किमी करण, हिन्दुराज वा एमसीसी पारीत गर्ने दौड धुप – भाग दौड – प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेस – जनता समाजवादी पनि खेलाडी छन् । हिन्दु राजमा पुग्ने छन् । यसविरुद्ध नयाँजनवादी क्रान्ति – माओवादी जनयुद्ध हो । एकाधीकारी पूँजीपति, बहुराष्ट्रिय पूँजी र पूँजीपतिले साम्राज्यवाद सञ्चालन ग¥यो कारपोरेट पूँजी – पूँजीपति – पूँजीवादले भूमण्डलीय साम्राज्यवाद सञ्चालन गरेका छन् । उत्पादन शक्ति – साधन – स्रोत कारपोरेट पूँजीपतिका खट्न पटनमा छन् । नानो – सुक्षम – अन्तरिक्ष – तारक – एटमिक युद्ध – आइटी, साम्राज्यवाद सञ्चालन गरेका छन्, साम्राज्यवादी युद्ध व्यवस्था सञ्चालन गरेका छन् । सूचना प्रविधि साम्राज्यवादले कब्जा गरेको छ । साम्राज्यवाद ध्वस्त गर्न माओवाद पकडौ । सूचना प्रविधि – उत्पादन शक्ति निर्माण – सञ्चालन गर्ने सर्वहारा – मजदुर वर्ग हुन् । सर्वहारा – मजदुर ÷ किसान वर्गको माओवादी जनयुद्ध हो । माओवादी जनयुद्धले साम्राज्यवाद ध्वंश गरेर सूचना प्रविधि उत्पादन शक्ति कब्जा – सञ्चालन गर्छ तब वैज्ञानिक समाजवाद हुन्छ । यी माओवादी कार्य – प्रचार – लेख लेख्न – पढ्न आँखाले सकेन मौखिक प्रचार गर्दै जान्छु दुवै आँखा मोतिविन्दूबाट पीडित भए र साम्राज्यवाद – संशोधनवाद मुर्दावाद । माओवाद माओवादी जनयुद्ध – नयाँ जनवादी क्रान्ति – सर्वहारा अधिनायकत्व जिन्दावाद । अलविदा ।
'सेल्फ क्वारेन्टाइन'मा आफूभित्रै कसरी रमाउने !
महिला हिंसाविरुद्वको १६ दिने अभियान
सकारात्मक आंखा र भाका